Naya Bikalpa | ओलीबिरुद्धको मोर्चाबन्दी बलियो बन्दै - Naya Bikalpa ओलीबिरुद्धको मोर्चाबन्दी बलियो बन्दै - Naya Bikalpa
ओलीबिरुद्धको मोर्चाबन्दी बलियो बन्दै
प्रकाशित मिती: २०७५ जेष्ठ २१, ०९: ४४: ३८
ईश्वरकै दबाब मान्न किन बाध्य भए ?
काठमाडौं । पार्टीमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म आफ्ना अनुचर र अन्धभक्तलाई मात्र अवसर र पद दिन बानी परेका नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलगाम निर्णय र गतिलाई ईश्वरले रोकिदिएका छन् । मनमौजी निर्णय गर्न पछि नपर्ने र आफ्नो विचारसँग असहमत हुनेलाई राजनीतिमा नामोनिसाना पनि राख्न नदिने इगो साँधेर बस्ने ओलीको चरित्र र व्यवहार बुझेका नेकपाका नेता तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार भने ओलीको निर्णयलाई असफल बनाई दिएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत सामेल गर्ने योजना आफूसँगको सल्लाह बिना नै भएको भन्दै ओलीसँग चिडिएका पोखरेलले फोरमका मन्त्रीले सपथ लिने कार्यक्रम नै झण्डै रोकिदिएका थिए । एमालेमा दुइ पटक सम्म महासचिव जितेका ईश्वरले बिहीबार उपेन्द्र यादवललाई आफूभन्दा माथि अर्थात प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रम लगत्तै दोश्रो नम्बरमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको योजनाको सूचना थाहा पाएका पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीसँग वार कि पार भन्दै दिउँसो दुई वजे बालुवाटार छिरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित दुई जनालाई ३ बजे सपथ खुवाउने कार्यक्रम थियो । तर मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्दा आफूलाई बाइकट गरिएको भन्दै झोँकिदै वालुवाटार छिरेका मन्त्री इश्वरले पोखरेल पार्टीका जिम्मेवार नेतासँगको सल्लाह र सहमति बिना आफूलाई अपमानित ढंगले तेश्रो बरियाताक्रममा राखे मन्त्रीपरिषद् मन्त्रीपषिद् नै परित्याग गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
नेकपा एमालेको दुई वटा महाधिवेशनमा महासचिवमा निर्वाचित पोखरेलले पनि आफ्नो शक्ति शुक्रबार देखाई दिए । उनकै पावरकैकारण राष्ट्रपति कार्यालय समेत आफ्नो पुरानो सूचना परिवर्तन गर्न बाध्य भयो । उनकै कारण मन्त्रीको शपथ लिन राष्ट्रपति कार्यालय गएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत उपप्रधानमन्त्री भएर फर्किए ।
रक्षा मन्त्री र प्रमबीच लफडा लामै भएपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले निकास निकालेका थिए । र, अन्त्यमा इश्वर, ओली र प्रचण्डबीच ६ बजे सहमति बनेपछि मात्र तीन बजे हुने भनिएको सपथग्रहण कार्यक्रम साढे तीन घण्टा पछि मात्र भएको थियो । मन्त्री इश्वर पोखरेलको चेतावनी पछि झस्किएका ओली उनलाई चिढ्याए आफ्नो सत्ताको आसन डगमगाउने त्रासले प्रचण्डलाई बोलाएर समस्याको समाधान गरेका भएका थिए । इश्वरलाई मनाउनको लागि प्रचण्डले इश्वर र उपेन्द्र दुवैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भए । जसले गर्दा पोखरेल र गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्मा एक तह बढुवाको ‘सरप्राइज’ गिफ्ट ओलीबाट प्राप्त गरेका हुन् ।
ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा हालसम्म कोही उपप्रधानमन्त्री थिएनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको चार महिना हुनै लाग्दासमेत ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नरहने चर्चा थियो । तर चौथो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा भने आफ्नो फाइदाको लागि ओलीले दुई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा ल्याउन सत्तारुढ दलले निकै प्रयास गर्दासम्म उपप्रधानमन्त्री दिने चर्चा थिएन । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटक पटक उपप्रधानमन्त्री माग्दासमेत सरकार सहमत भएको थिएन । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमै भए पनि फोरम अध्यक्ष यादव सरकारमा जान तयार भए ।
पार्टीबाट मन्त्रीको नाम अन्तिम टुंगो लगाउँदासम्म यादव उपप्रधानमन्त्री हुने टुंगो थिएन । पार्टीबाट मन्त्रीको शपथ लिन तयार भए अध्यक्ष यादव र मोहम्मद इस्तियाक राइ आफ्नो पार्टीबाट निर्णय लिएर शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय निवास शीतल निवास पुगे । तर शीतल निवास पुग्दा अध्यक्ष यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो । उनले उपप्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पे । यसअघि यादव उपप्रधानमन्त्री हुँदै छन भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत थाहा थिएन । मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुअघि मात्र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यादवको पद स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थियो ।
यसअघि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका थिए । संचार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि राज्यमन्त्रीबाट संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा बढुवा भए । फोरमबाटै सरकारमा गएका राईले भने शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । शपथ हुनुभन्दा केही बेरअघि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिभन्दा त्यसपछि जारी गरिएको विज्ञप्ति फरक देखियो । सुरुमा दुई मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित विज्ञप्ति जारी गरियो । पछि दुई उपप्रधानमन्त्री थपिएसँगै सबै मन्त्रीको जिम्मेवारीसहितको विज्ञप्ति जारी गरियो । फोरमबाट दुई जना मन्त्री थप भएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार २४ सदस्यीय भएको छ ।
किन बाध्य भए ओली ?
ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने यसअघि अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यहीअनुसार ओली सरकारमा हालसम्म उपप्रधानमन्त्री थिएनन् । तर फोरम सरकारमा जानेवित्तिकै दुई जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो । यसको मुख्य कारण मन्त्रीको वरीयता व्यवस्थापन हो । फोरम अध्यक्ष यादव यसअघि दुई पटकसम्म उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । रक्षामन्त्री पोखरेलले पनि यसअघि नै उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए ।
त्यसकारण कसलाई ‘सिनियर’ मान्ने भन्ने सरकारलाई समस्या थियो । यादवले आफूलाई प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयता चाहिने भनेपछि ओलीलाई सो कुरा मिलाउन केही समस्या भएको थियो । त्यसपछि ओलीले उपप्रधानमन्त्री राखेर दुई जनालाई मिलाए । यादवलाई उपप्रधानमन्त्री दिएपछि पोखरेलले दोस्रो वरीयता पाउने भएका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई जना उपप्रधानमन्त्री थप गरेका हुन् । उपप्रधानमन्त्री थप गरेपछि पनि प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल छन्। त्यसपछिको वरीयतामा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री यादव छन् ।
२०७५ जेष्ठ २१, ०९: ४४: ३८